I ezigqame ngomunye wabokuqala entwasahlobo Izimbali ziqhakaza ngokushesha ngemva ukuvela. Udinga ukunquma uma aphonswe Tulips endaweni ethize futhi izimo zezulu. Ezinye izinhlobo izitshalo zidinga yonyaka ukumba up the ama, kodwa kukhona izinhlobonhlobo, ezikhulayo ngokuphelele endaweni efanayo iminyaka eminingi.
Ukulungiselela kwenhlabathi futhi isikhathi
Ukunikeza simila zasemazweni aluhlaza kanye nemibala esishukumisayo efihlekile, umsebenzi kufanele kuqale ekwindla. Indlela ukutshala Tulips endaweni entsha uma esigabeni sangaphambilini selikhathele futhi udinga ukuphumula futhi yokutakula? Ukuze bulblets ukhetha inhlabathi okuxekethile, ezindaweni ngaphandle kokuphakamisa eduze komhlaba ebusweni. Umhlabathi edingekayo nihlambulula emfuleni letshebetshebe okuxubile ne Peat noma sphagnum moss. Kodwa efaka umquba izakhi ezifana umquba noma humus, ebeka phansi isikhathi esingaphezu konyaka noma emibili ngaphambi kokutshala. Kungcono zalisa onjalo kusho ezweni "iholidi."
Nquma isikhathi sokutshala Tulips, kungcono ancike isipiliyoni balimi wendawo. Esikhathini indawo phakathi ukudalwa imithombo emisha kanye kuhlume ama e ekhanyayo wenziwa kusukela maphakathi no-ngasekupheleni September futhi ihlala kuze kube maphakathi no-Okthoba. Ezindaweni eningizimu, lezi izinsuku udlulele ekuqaleni kuya maphakathi no-Okthoba. Umthetho main: ukhula lwenkohlakalo egcwele kufanele kwenzeke ngaphambi ukuqala yesithwathwa.
Ilungiselela ama zokutshala
Lapho aphonswe Tulips, impahla ukulungele liyadingeka ukuhlunga ngosayizi. Kulo kuzoncika indawo imbali kanye kwemithombo esizayo ukujula. Ezweni balimi professional kanye abalimi kukhona ngezigaba elandelayo Tulips kanye ama:
ukuhlaziywa 1st -. Usayizi ukutshala impahla kufika ku-3.2 cm Kungasiza uthola izitshalo ezinkulu kakhulu nge spike omkhulu. Zivame esetshenziswa kuphela ziphuzo zazihluzwa Tulips ebusika;
. Luhlolo 2nd - ububanzi 2.5-3.1 cm Lezi izinhlobo azisetshenziswa ziphuzo zazihluzwa, kodwa anikeza imbali umoba esikhulu kakhulu;
ukuhlaziywa Okwesithathu (2.0-2.4 cm) - lapho Tulips aphonswe osayizi idatha uthole eside neziqu nge efihlekile ukuthini. Nokho, lezi izinhlobo ukuhluma kuyinto 50% kuphela futhi kuncike sezulu nesimo sendawo;
izingane 1st futhi lokudlulisa 2nd babe Ubukhulu 1.4-1.9 cm ngaphansi kuka 1.4 cm. ukuhlaziywa 1st esetshenziselwa self-kulinywe zokutshala impahla noma ukudala ezincane zezimbali nezinkamba nge Tulips. A anyanisi encane ukuba 1.3 usayizi cm hhayi eziqhakaza, zingabantu nje efanelekayo okhulayo.
Kukhethwe zokutshala impahla uhlolisise, walahla ama ezilimele noma onesifo. Lapho Tulips befakwa okokuqala, kuqala ofakwe izimpande, u-anyanisi e-isixazululo okhanyayo potassium permanganate ukuze 15-20 imiz., Ukuqeda ukungcoliswa inhlabathi noma izitshalo ngekusasa isifo okungahleliwe.
Ukutshala Tulips i ekhanyayo
I emithonjeni kunqunywa ubukhulu ama ukujula kodwa ngokuvamile banamathele kathathu ubukhulu zokutshala impahla. Okungukuthi, Tulip 2 cm zidinga emgodini 6 cm begodu 4 cm - 12 cm, njll Uma izwe isetshenziswa nqabela ebusika ijule ngokungaphezulu, imibhede kudingeka ukulala phezu abolile amahlamvu 8-12 cm Uma izinga lokushisa uwela ... ezingaphezu kuka -4 C - asikho isikhoselo ayidingeki. Udinga ukukhumbula imithetho emithathu yokuzibeka ethubeni Tulips - amanzi omuhle, ukujula efanele futhi akukho ama peremorozit. Ngokulandela lokhu alula, kumane ngokwanele ukuze uthole izimbali zawo ziwukudla namaqabunga aluhlaza futhi ibe esiyingqayizivele Ukuthoma ukunambitheka engadini yabo.
Indlela zihlume amazambane sokutshala? yokutshala amazambane. Amazambane ngaphambi kokutshala
Yini okudingeka uyenze ukuze sijabule ekuvuneni zonke sitrobheli ehlobo? Ukutshala kanye Ukunakekela
Yiziphi engcono ebusika amathayi: ukubuyekeza abakhiqizi umkhiqizo ezaziwa
Izinzwa Epidural sesigaba cesarean: izinkomba kanye nezinzuzo
Ngubani lokhokhela intela imoto?
Indlu yakhe ngokhonkolo evundile: ukubuyekezwa abanikazi